तपाईं जन्मेको बार कुन हो ? यी बार जन्मिएकाको हुन्छ प्रेम विवाह – Khabar Silo
मानिसहरु जन्मिदा आ-आफ्नै भाग्य लिएर आएका हुन्छन् भन्ने हिन्दू धर्म शास्त्रको मान्ता रहेको छ । धर्मशास्त्रअनुसार जन्मकै आधारमा मानिसको भाग्य पनि निर्धारण भएको हुन्छ । जन्म कुण्डलीअनुसार हरेक मानिसको भाग्य फरक–फरक रहने गर्छ ।
काठमाण्डौ । माछाको रक्षा नाग नागीनले गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । त्यो पनि नेपालमै । काठमाण्डौबाट झण्डै २ किलोमिटर पर चोभार भनिने ठाउँमा एउटा यस्तो पोखरी छ जहाँ माछाको रक्षा त्यस पोखरीमा भएको नागराजा र नागरानीले गर्ने गर्दछन् । टौदह भन्ने ठाउँमा रहेको उक्त पोखरीलाई कर्काटक […]
काठमाडौँ । ज्योतिषका अनुसार कु’न्डलीमा यदी केही ग्रह दोष रहेको छ भने मानिसलाई पैसाको स’मस्या भो’ग्नु पर्ने हुनसक्छ। ग्रह दोषबाट टाढा रहनका लागि कयौं उपायहरु रहेका छन् । यी उपायहरुबाट ग्रह अनुसार अशुभ प्रभावहरुमा कमी आउन सक्नेछ । र, कयौं सकरात्मक फल पनि प्राप्त हुनेछ । हामीसँग जुनसुकै वस्तु हुन्छ ती सबै कुराको प्रभाव हाम्रो […]
इतिहासको हरेक स्रोतमा ठूलो प्रशस्ती र विशिष्ठताको भेटिने कैलाशकुट भवनको खोजी !
इतिहासको हरेक स्रोतमा ठूलो प्रशस्ती र विशिष्ठताको भेटिने कैलाशकुट भवनको खोजी हुन थालेको सात दशक हुन लाग्यो । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालीले समेत इतिहासको खोजी गर्ने अवसर पाए ।नयराज पन्तको पुस्तक लिच्छवि संवत्को निर्णयमा उल्लेख भएबमोजिम तत्कालीन गृहमन्त्री वीपी कोइराला लगायतले आफ्नै खर्चमा इतिहासको खोजी गर्ने बन्दोबस्त मिलाएका थिए । कोइरालाको सहयोगमा नयराज […]